Both Old and Young to Ponder – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ကျလူ တက်လူ ထိုနှစ်လူတို့ ဆင်ခြင်ဖို့
ကွန်ပျူတာကို ခိုင်းချင်တာ တစ်ခု ရှိလာတယ်။ အဲသလို ခိုင်းတာမျိုးကို လုပ်နေကျဆိုပေမယ့် အမြဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ မေ့လောက်မှ တစ်ခါ လုပ်ရတာမျိုး ဖြစ်နေတော့ လွဲချော်နေတယ်။ ဘယ်လို ခိုင်းရမယ်ဆိုတာကို မေ့နေတယ်ပေါ့။
ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရနိုင်တော့တဲ့ အဆုံးမှာ သားတော်မောင်ကို အကူအညီ တောင်းရပါတော့တယ်။ သူက ချက်ချင်း အစဖော်ပေးတယ်။ လုပ်ချင်တာကို လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ ရသွားပါတော့တယ်။
လုပ်နေရင်းနဲ့ စဉ်းစားမိလာတာ တစ်ခု ရှိလာတယ်။ သားတော်မောင်က အခု ၁၈ နှစ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်တုံးက သူက အစစအရာရာ ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေကို အားကိုးနေခဲ့ရတာ။ သူ မသိတာ၊ မတတ်တာတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ကပဲ သင်ပေး၊ ပြပေး လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ရတာ။ ယုတ်စွအဆုံး၊ သည်ကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အရာကိုတောင်မှ သူ့ကို ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့၊ သင်ပေးခဲ့တာ။
အခုကျတော့ သူ့ကို ကျွန်တော် ဆရာတင်နေရပြီ။
မကျေမနပ် ပြောလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သဘာဝကို ဆင်ခြင်လိုက်မိရတာပါ။
ဟုတ်ပါရဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်၊ သား ၄-၅-၆ နှစ် ၇ နှစ်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ အဲတုန်းက သူ့ကို အားမကိုးနိုင်သေးဘူး။ သူက အစစ ကိုယ့်ကို အားကိုးနေရတာ။ သည့်ထက် ငယ်သေးတုန်းကဆို သူ စားတာ၊ သူ အဝတ်လဲတာ၊ သူ တစ်ပိုတစ်ပါး သွားတာကအစ လူကြီးမိဘတွေက ပံ့ပိုးပေးနေခဲ့ကြရပါတယ်။ ကူညီနေကြရပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့ဟာသူ လုပ်နိုင်လာတယ်။ အဲဒီ့ကမှ တစ်ဆင့်၊ သားရေ… လမ်းထိပ်က ဆိုင်ကို ပြေးပြီး ဟိုဟာလေး ဝယ်ပေးပါဦး၊ ဟိုအိမ်ကို သွားပြီး ဟိုဟာလေး ပို့ပေးပါဦး လုပ်နိုင်လာတယ်။ နောက်ကျတော့ မီးချောင်း လဲတာ၊ ရေစက်က လေခိုသွားလို့ ရေချူတာမျိုးလေးတွေကအစ စက်ကိရိယာတစ်ခုခု အပယိက ချို့ယွင်းတဲ့အခါ ပြုပြင်တာမျိုးအထိ သူ့ကို ခိုင်းလို့ ရလာတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အားကိုးလာရတယ်။
ဟော… အခုကျတော့ ကျွန်တော် မေ့နေတာကို သူ့ကို မေးရတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူ့ကို ဆရာတင်လာရတယ်။ ကိုယ်သိနှင့် ကျွမ်းကျင်ပြီး နယ်ပယ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူက ကိုယ့်ထက် ပို သေချာနေ၊ ပိုသိ၊ ပိုတတ်နေတာကို အသိအမှတ်ပြုလာရတယ်။
မျိုးဆက်သစ်နဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း။ ကျလူနဲ့ တက်လူရဲ့ သဘောပဲဆိုတာ ဆင်ခြင်မိနေတယ်။
ဟုတ်ပါရဲ့… ကျွန်တော်က ကျလူ။ သူက တက်လူ။ တက်ခါစတုန်းကတော့ ကျလူကို တက်လူက အားကိုးခဲ့ရတာ။ တက်လူလေး တစ်လူလူ ဖြစ်လာချိန်ကစပြီး တက်လူကို ကျလူက ပြန်အားကိုးလာရပြီ။
ဒါ သည်ကောင် ၁၈ နှစ်၊ ကျွန်တော် ၅၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သတိထားမိသွားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ရှေ့လျှောက် သူ့ကိုပဲ အားကိုးရမှာတွေက တစ်နေ့တခြား များလာတော့မှာ။ နောက်ဆုံးမှာ ကလေးက လူကြီးဖြစ်၊ လူကြီးက အိပ်ရာထဲလဲသွားတဲ့အခါ လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို ပြန်မှီခိုရ၊ အားထားရတဲ့ဘဝ ရောက်လာမှာပါ။
တကယ်တော့ ဒါ သဘာဝပဲ။ မျိုးဆက်သစ်၊ မျိုးဆက်ဟောင်း၊ ကျလူနဲ့ တက်လူ၊ လူငယ်နဲ့ လူကြီးတို့ရဲ့ သဘာဝ။
အဲဒီ့မှာ ဆက်စဉ်းစားတော့ ပို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ကို အားကိုးနိုင်လာတာလဲ။ တချို့မိဘတွေ ခမျာများမှာ သားသမီးတွေ အားမကိုးရလို့ ညည်းညူနေကြတာ ကြားဖူးတယ်။ ဘယ်နေရာမှ အားမကိုးရဘူး၊ ဘာမှ အားမကိုးရဘူး၊ ဘာညာ။
အဲဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ အားမကိုးရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ ရှိတယ်။ အားမကိုးရတဲ့ လူငယ်တွေလည်း အများကြီးပဲ။
အားကိုးရအောင် အစောကြီးကတည်းက ပြင်ဆင် ပျိုးထောင်ထားရင် အားကိုးလို့ရတဲ့ သားသမီး၊ အားကိုးထိုက်တဲ့ လူငယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အဲ… လူကြီးမိဘတွေဘက်က အားမကိုးရအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ထားမယ်ဆိုလည်း ဖြစ်နေတာပဲ။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်း မျက်မှောင်ကုပ်သွားပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ လူငယ်လေးတွေ၊ သားသမီးလေးတွေကို လူကြီး မိဘတွေက ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြနဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အလိုလိုက်၊ အကြိုက်ဆောင်လွန်းရုံသာမက တဟဲ့ဟဲ့နဲ့ အစိုးရိမ်ကြီးကာ နေရာတကာမှာ ကာဆီးကာဆီးသာ လုပ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ကလေးခမျာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု နည်းပါးနေပြီး ဘာကိုမှ ရဲရဲ မလုပ်တတ်တော့မှာ သေချာပါတယ်။
ရှေးသရောခါ ပြည်ဗာရာဝယ် ကုဋေကြွယ်အား သူဌေးသားလျှင် ဆိုပြီး ဆွေးမြေ့လွန်းတဲ့ ပုံပြင်ဟောင်းထဲက နမူနာဟာ ကြီးလာတဲ့အခါ ဘာမှ အားမကိုးရတဲ့ သားသမီး၊ ကြီးလာတဲ့အခါ ဘာမှ သုံးမရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတာကို ပြဆိုနေပါတယ်။ အစဉ်အလာအရဆိုရင်တော့ အဲဒီ့သူဌေးသားဟာ ပညာသင်ရမယ့် အရွယ်မှာ ပညာမသင်ခဲ့လို့သာ အခုလို ဖြစ်ရတာပဲ၊ အရပ်ရပ်၌ နှံအပ်ဥစ္စာ ရှိလေပါလည်း သင်ဟာ လူမိုက် ဒုစရိုက်မို့ဆိုပြီး သူ့ကိုသာ လှိမ့်အပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘယ်သူကမှ အဲဒါ သူ့မိဘတွေအပြစ်လို့ မကောက်ယူခဲ့ကြဘူး။ ဒါလည်း အပြစ်တော့ မတင်ထိုက်ပါဘူး။ မိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းထဲဆိုတဲ့ လူ့ဘောင်မှာ မိဘရဲ့ အမှားအမှန်ကို ဆင်ခြင် သုံးသပ်လိုက်ရင်ပဲ ကံကြီးထိုက်တော့မလို ဖြစ်နေပေတာကိုး။ အမှန်ကတော့ဗျာ၊ ဘုရားနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းထဲ ထားတယ်ဆိုတာက ပူဇော်မှုအပိုင်းမှာပါ။ အဆင့်အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆင့်ကို အဘယ်ပုထုဇဉ် လူသားကသော်မျှ မယှဉ်အပ်ဘူး ဆိုတာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း လက်ခံနိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်တက်ပြောရင် မိဘဖြစ်သွားတာနဲ့ အလုံးစုံကို ထိုးထွင်း သိမြင်နိုင်စွမ်းဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်များမှာသာ ရှိတဲ့ ဉာဏ်တော်မျိုး အလိုလို ရရှိမလာဘူးဆိုတာကိုလည်း လက်ခံနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် မိဘဖြစ်တာနဲ့ အမှားကင်းပြီလို့ မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုကိုလည်း လက်မခံချင်သည့်တိုင် လက်ခံကြရမှာပါ။
တခြားနေရာတွေဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားအရာမှာ မိုးပျံအောင် ကောင်းနေ၊ သီလငါးပါးကိုလည်း ခါးဝတ်ပုဆိုးပေါ်မှာ ခါးပတ်ကြီး ထပ်ပတ်ထားသလို မြဲနေသည် ဖြစ်စေဦးတောင် မိဘဖြစ်တာနဲ့ သားသမီးကို ထိန်းကျောင်းပဲ့ပြင်နည်းကို အလိုလို သိပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုစုပျိုး ထောင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့ အတတ် မပြောနိုင်မှာလည်း သိပ်ကိုသေချာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားဟာ ကောင်သေဠင်းတ ကျတဲ့အထိ ဘဝပျက်သွားတယ်ဆိုရင် သူ့အပြစ်က အလွန်ဆုံးမှ ၂၅ % သူ့မိဘ အပြစ်က ၇၅ % လို့ သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် ကလေးသူငယ်စိတ်ပညာကို သတိမူ မိသူများ သဘောတူနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
မိဘက ကျောင်းထားသားပဲ၊ သူက ကောင်းကောင်း မသင်တာ၊ သူကိုက ဉာဏ်ထိုင်းတာ၊ သူကိုက တေချင်ပေချင် လေလွင့်ချင်တာလို့ ပြောမယ့်သူတွေလည်း ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ လိုသမျှ ဝယ်ပေး၊ ကျောင်းကောင်းမှာ ထားပေး၊ ဘာမဆို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးနေပေမယ့် အဖေနဲ့ အမေတို့ တစ်ချိန်လုံး ရန်ဖြစ်နေတာမျိုး၊ အဖေက စီးပွားရေးပဲ လုံးပန်းနေပြီး သားသမီးကို လှည့်မကြည့်နိုင်တာမျိုးတွေကလည်း ကလေးရဲ့ ကျောင်းနေ ပျော်မှု၊ ကျောင်းစာ စိတ်ဝင်စားမှု၊ လူမှုရေးစတဲ့ အကျိုးတရားတွေအပေါ်မှာ များစွာ ရိုက်ခတ်နေနိုင်သေးတဲ့အချက်က ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါက လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့ မိဘတွေအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောတာပါ။ အဲဒီ့ကမှ ကလေးက ကျောင်းနေပြီဆိုရင် ကျောင်းက ဆရာတွေကလည်း အဲဒီ့ကလေးရဲ့ အရည်အချင်းအပေါ်မှာ ပူးတွဲ တာဝန်ရှိလာပါတယ်။ ဒါကို အထူး ရှင်းလင်းနေစရာ လိုမယ်မထင်လို့ မရှင်းတော့ဘူးနော်။ သည်ကမှ တစ်ဆင့်တက်လို့ အလုပ်ခွင် ရောက်လာပြီဆိုရင် လူတောထဲ တိုးဝင်ခါစ လူငယ်လေးရဲ့ သင်ယူမှုမှာ အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ လုပ်ခွင်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ အနေအထိုင်တွေက ရာခိုင်နှုန်း အတော်များများကို လွှမ်းမိုးနေပါတော့မယ်။
မိဘ၊ ဆရာများနဲ့ ငယ်ဘဝ ပတ်ဝန်းကျင်က အကျင့်ကောင်းတွေကို အခိုင်အမာ ပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် လုပ်ခွင်ဝန်းကျင်မှာကျတော့ မိုးခါးရေပဲဆိုပြီး အများတကာက အကျင့်ပျက် ခြစားနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ လူငယ်လေးဟာ မိုးခါးရေ လိုက်သောက်ဖို့ အလားအလာ နည်းနေနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မိဘ၊ ဆရာများနဲ့ ငယ်ဘဝ ဝန်းကျင်ကလည်း လျော့တိ၊ လျော့ရဲ၊ လုပ်ခွင်ဝန်းကျင်ကလည်း အူလည်လည်နိုင်နေမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့လူငယ်လေးရဲ့ စာရိတ္တပိုင်းဟာ စိတ်ချစရာ သိပ်ကောင်းနေတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်နည်းပြောရရင် အားကိုးထိုက်တဲ့ လူကြီးဘဝကို ရလာစရာ အကြောင်းနည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြောင်းပြန်အားဖြင့် မိဘဆရာနဲ့ ငယ်ဘဝဝန်းကျင်က အရမ်းကြီး လျော့တိလျော့ရဲ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် စနစ်ကျတဲ့၊ စည်းကမ်းရှိတဲ့ လုပ်ခွင်ဝန်းကျင်မှာ မွေ့လျော်လာနိုင်မယ်၊ လုပ်ခွင်အားလုံးကလည်း စနစ်ကျနေမယ်၊ စည်းကမ်း ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ပင်ကို စရိုက်ကို ဘေးက ကြပ်မတ်ပေးသွားနိုင်ပြန်သေးတာမို့ အနည်းနဲ့ အများတော့ အားကိုးရတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဘဝကို ရလာနိုင်မလားဆိုတာကလည်း စဉ်းစားဖို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။
ကျွန်တော် ဆွေးနွေးကြည့်ချင်တာကို ချစ်စွာသော စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းများ သတိထားမိကြပြီလား မသိဘူး။
ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးတွေဟာ လူငယ်တွေကို ပခုံးပြောင်းပေးရမှာဟာ ရှောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ နိယမတရား၊ အဲလိုနဲ့ပဲ လူသား မျိုးနွယ်စု ဆက်လက် ရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ သဘောသာဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ့ ပြောင်းပေးခဲ့ရမယ့် ပခုံးလေးတွေ သန်မာမှု ရှိမရှိ၊ သန့်စင်မှု ရှိမရှိ၊ မွန်မြတ်မှု ရှိမရှိဆိုတာအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမက ရာခိုင်နှုန်းများစွာ တာဝန်ရှိနေသူများကလည်း အဲဒီ့ နောက်မျိုးဆက်ကို အကျင့်စရိုက် အထွေထွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကြလေမယ့် မျိုးဆက်ဟောင်းအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် သားလေးကို ကိစ္စငယ်လေးတစ်ခုအတွက် အားကိုးလိုက်မိရာက ဆက်လက် စဉ်းစားမိသွားတာလေးတွေကို စာအဖြစ် ချရေးကြည့်လိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သားဟာ တကယ်အားကိုးထိုက်တဲ့ သားတစ်ယောက် ဖြစ်လာ မလာဆိုတာကို သူ့အနာဂတ်ကသာ ဆုံးဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်သလို ကျွန်တော်ဟာလည်း လက်ဆင့်အကမ်း ကောင်းတဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုလည်း သူ့အနာဂတ်ကသာ ပြဋ္ဌာန်းသွားတော့မှာ သေချာနေပါတယ်။
စာဖတ်သူ လူကြီးမင်းကရော လက်ဆင့်ကမ်းကောင်းတဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်း ဖြစ်မှ ဖြစ်ကဲ့လားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကတော့ မျိုးဆက်သစ်၊ ကိုယ့်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးနေတဲ့ မျိုးဆက်ဟောင်းကို ကောင်းမကောင်း ပြန်ဆန်းစစ်ရင်း ကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာကို ဆင်ခြင်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့…
(ယနေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ်စဉ် ၃၈ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာမူကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on 10 December 2009 17 February 2010 Categories Parenting, Reproduction
8 thoughts on “Both Old and Young to Ponder”
12 December 2009 at 11:29 pm
ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အပြုအမူတွေက လက်ဦးဆရာမိဘတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အပေါ် အများကြီး မူတည်တာ အမှန်ပါပဲ..
သူ့ဘဝ အောင်မြင်မှု မအောင်မြင်မှုကတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေမှာပါ…
(ဆရာ့ရဲ့ ဆောင်ပါးတွေကို ဒီမှာ ဖတ်လို့ ရနိုင်တာ ကျေးဇူးပါ)
မကြာခင် မိခင်နေရာ ရောက်တော့မှာမို့ဆရာ့ရဲ့ သည်ဆောင်ပါးလေး ဖတ်လိုက်ရတာ ကျွန်မအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။
17 December 2009 at 6:09 am
အားလုံး တွေးဆ ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ကြပါစေ ဆိုတဲ့အတိုင်း တွေးဆ မိသွားပါတယ် ဆရာ။ အဓိကက ကိုယ်က အားကိုးထိုက်တဲ့ သားသမီး ဖြစ်ပါမှလဲ လက်ဆင့်အကမ်းကောင်းတဲ့ လူကြီးတယောက်ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ် ထင်မိတာပဲ။
နောက် ဆရာ ချိုသင်းကို ပြောဖူးတာလေး သွားသတိရမိတယ်။ ခင်ဗျားကို brain wash လုပ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သားသမီးဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားလို သားသမီးမျိုး လိုချင်တယ် လို့။
သင့်ဘ၀လုပ်တုန်းက ဆုံဖြစ် စကားပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်တုန်းက ဆရာပြောခဲ့တာ သတိရနေလို့ပါ။ ဘာလို့များ brain wash လုပ်ချင်ပါလိမ့်..။ :))
7 January 2010 at 11:43 pm
ကျွန်တော့်စာတွေကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ကြည့်ပါလေ။ အဲဒါဆိုရင် ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ အဖြေကို တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
21 December 2009 at 7:18 pm
12 January 2010 at 8:52 pm
Hi Saya! I’ve been in and out of town so I haven’t hadachance to read your blog forawhile so I’m just catching up today. Great article, and I thinkalot of parents need to read that one. After reading your article, it reminded me of my cousin and I just wanted to share my thoughts with you.
My cousin went to study in the US, got her Bachelor and Master degrees, and now she’s working in the US. As you can see, she’s very smart and everyone (including me) thinks that her parents raised her very well. Well, she’s the only child of her parents. We grew up together, but we felt quite distant from each other when we reached to the middle school age. She was very busy taking classes after another that we never hadachance to hang out together. She left to the US to study and since then my cousin and I haven’t seen each other for9years. All those years, we kind of kept in touch with each other through one or two emails or just saying hi when we see online. Well, recently she came to visit me.
During her visit, I saw her life fromadifferent point of view that I had never seen before. She’s living and working in the US, but she has very few friends. She basically blamed to her parents for the lack of social interactions with other people her age as she was growing up. She blamed that her parents had never taken her any trips that she had never seen outside of her bubble until she left to the US. She blamed her parents that she had never tasted any food from other countries rather than homemade cooking food. She blamed her parents that she had never learned how to swim or rideabike. And the list goes on and one. I was shocked to hear all these things because people would think that she’s livingagood life working in the US earning lots of money.
As I was growing up, I envied her life because she was the only child and her parents sent her to the best school making sure that she was well educated. My parents couldn’t afford to do that as we have4siblings. But my parents took us on vacations every2or3years. We grew up seeking adventures in life. I remembered thatalot of people criticized my parents for their parenting style. Now as we all grow up, in my opinion, we turn out ok because none of my brother and sisters have bitter feelings upon our parents, and we appreciate what our parents have done to us. On the other hand, my cousin didn’t give any credit for what her parents had given her, but she blamed everything on her parents for what is lacking in her life.
I’m sure her parents did everything they thought was the best for her, but she doesn’t appreciate what her parents have done to her. I have been ponderingalot after the conversation with my cousin, and then I am so thankful for my parents for raising me to become like who I am today. And I realize that there’s no definite right or wrong way of how to raiseachild. And I’m notaparent yet, but asateacher who works with children everyday, I think whatever we think is the best for the children is not always the best thing for them.
13 January 2010 at 2:28 pm
Thanks, Zarni. It wasagreat comment and reminded me of my own attitude towards my parents. I was the same with your cousin until the last few years, blaming my parents for my weaknesses and imperfections. But now I realise that without their strenuous efforts and sacrifices, I shall have never been able to do the things I’m doing right now. It’s human nature to overlook the good things and see more of bad things. Well, time speaksalot, dear.
Previous Previous post: Disconcerting Experience
Next Next post: Compliments of the Season